विदेशी युवतीलाई भैरहवाको होटलमा राखी रातदिन बलात्कार !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > विदेशी युवतीलाई भैरहवाको होटलमा राखी रातदिन बलात्कार !!
विदेशी युवतीलाई भैरहवाको होटलमा राखी रातदिन बलात्कार !!
भारतका कुख्यात यौन व्यापार हुने कोठीहरूमा नेपाली युवतीलाई बिक्री गरिने समाचार नौलो होइन । अझै पनि कैयौँ नेपाली युवती विभिन्न बहानामा भारत पुर्याई कोठीमा बेचिइरहेकाछन् । यस कथामा भने हालै नयाँ मोड आएको छ । पछिल्लो समय विदेशी युवतीलाई पनि भारतका कोठीमा राख्ने गरिएको खुलेको छ । र, यसको मूल ट्रान्जिट नेपाल बन्न थालेको छ ।एक भारतीय युवा प्रहरीको सहयोग
खोज्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको आइपुगे । उनीबाट आएको सूचनाले कार्यालयमा रहेका प्रहरी छक्कै परे । दिल्लीबाट ढुन्मुनिदै भैरहवा आइपुगेका उनले दिएको सूचना अलि अविश्वसनीय थियो । सहजै पत्याउनु कठिन हुनु स्वाभाविक थियो तर सूचना गम्भीर भएकाले एसपी श्याम ज्ञवालीले उनले भनेको लोकेसनमा प्रहरी टोली पठाए ।
होटलमा गएर प्रेमिका भेटेपछि उनलाई त्यहाँको अवस्था सामान्य लागेन र उनी सहयोगका लागि प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । ‘ती भारतीय युवाका कारण नै भैहरवामा मानव तस्करहरुले बनाएको सेल्टर खुल्यो,’ एसपी ज्ञवालीले भने, ‘उनले प्रहरीलाई ठूलो सहयोग गरे ।’ अाेएसनेपालबाट
उडेको केहि बेरमै जहाजको एक इन्जिन फेल, तर पाइलटले यसरी बचाए सबै यात्रुहरुलाई (भिडियो सहित)
संक्रमित नेतालाई बचाउन काठमाडौं छिरेका न्यौंपाने आफै घर फर्किन पाएनन्